Fifandonana nahery vaika: zandary 5 indray voatifitry ny dahalo | NewsMada
Fifandonana nahery vaika: zandary 5 indray voatifitry ny dahalo
Zandary dimy lahy no fantatra fa naratra voatifitry ny dahalo, nandritra ny fifandonana nahery vaika, tao Isorana, kaominina ambanivohitra Matsiatra Ambony, omaly maraina. Voalaza fa voa mafy mihitsy ny iray amin’izy ireo.
Nampiasa helikoptera mihitsy ny zandary nandritra ny fifandonana tamin’ireo dahalo tao amin’ity ala fanafenana omby halatra ity. Araka ny fampitam-baovao avy amin’ny zandary, nahazo loharanom-baovao mialoha izy ireo fa misy ala fanafenan’ireo andian-dahalo omby halatra ao amin’io toerana io sady fanadiovan’izy ireo izany, mialoha ny hivarotana ireo omby eny an-tsena. Tonga teny an-toerana vao maraina (omaly io) ny zandary avy ao Fianarantsoa nampian’ny avy any Sakaraha nanao “renfort”. Tifitra variraraka avy hatrany anefa no nitsenan’ireo dahalo azy ireo avy ao anaty ala. Raikitra ny fifandonana tamin’ny alalan’ny fifampitifirana teo amin’ireo zandary sy ny dahalo. Nisy tamin’ireo dahalo koa voatifitry ny zandary. Ny zandary kosa voan’ny balan’ireo dahalo ka ny iray no tena voa mafy raha ny fampitam-baovao voaray avy any an-toerana. Nalefa notsaboina haingana ao amin’ny Hopitaliben’i Fianarantsoa ireo zandary voatifitra ireo ary notaterina tamin’ny helikoptera, ny omaly ihany. Nanova paikady ireo zandary mbola afaka nanohy ny hetsika no sady mbola nampiana ihany koa ny isan’izy ireo. Nanao savahao ny ala ny zandary, hatramin’ny omaly hariva. Nandositra niaraka tamin’ny omby miisa eo amin’ny 150 eo ho eo ireo malaso.
Mitohy ny fanenjehana amin’ny helikoptera…
Raha ny fampitam-baovao voaray farany, mbola mitohy ny fanenjehana ireo dahalo amin’ny alalan’ny helikoptera amin’ny fitsinjovana ny lalana nizoran’ireto malaso ireto, hatry ny omaly. Mitohy ny hetsika, saingy marihina fa ny angom-baovao no nahatonga ireo zandary ho avy tany amin’io ala fieren’ny dahalo io fa tsy antso vonjy tamina halatra omby niseho.
Vao tamin’ity herinandro ity no nahazo fitaovana raitra hiadiana amin’ny asan-dahalo ny teo anivon’ny zandarimariam-pirenena. Efa nalefa any amin’ireo toerana mafana amin’ny asan-jiolahy ireny fitaovana ireny, raha ny fanazavana voaray.
Mizara telo miavaka tsara koa ny “Opération Mandio” ataon’ny zandary ao amin’ny vondron-tobim-pileovan’ny zandary ao Atsinanana, Analanjirofo ary Alaotra Mangoro. Voalohany, ny fametrahana ny filaminam-bahoaka amin’ireo faritra anjakan’ny asan-dahalo, toy ny amin’ny sisin-tany mampisaraka ny faritra Alaotra Mangoro sy ny faritra Betsiboka ao amin’ny distrikan’i Tsaratanana izay tena hitrangana asan-dahalo saika isan’andro noho ity sisin-tany ity fandalovana omby sy toerana be mpiomby omby ihany koa. Faharoa, ny fanamafisana ny fanaraha-maso ny lalam-pirenena ka ho an’ny Atsinanana dia ny RN 2 amin’ny fijerena manokana ny famakiana kaontenera sy ny fanafihana kamiaobe sy taksiborosy. Fahatelo, ny fisian’ireo zandary misahana ny filaminana an-tanàn-dehibe amin’ny firongatry ny fanafihana mitam-piadiana ao Toamasina. Ho an’ireo mila vonjy ao anatin’izao “Opération Mandio” izao dia afaka miantso ny zandary eto Toamasina amin’ny laharana 034.05.701.39 / 034.14.005.69 / 034.14.006.56 / 034.20.145.97.
Jean Claude sy Sajo